KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maxkamada Hargeysa oo dacwad layaab leh u farisatay
Friday 1 February 2013 08:24
Maxkamada Hargeysa oo dacwad layaab leh u farisatay
Muqdisho (KON) - Magaalada Hargeysya ayaa waxaa ka socota dacwa layaab leh oo markii ugu horaysay ay Maxkamadi u fariisato.
Nadra Maxamed Jaamac oo fariin qoraal u dirtay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa xabsi la dhigay ka dib markii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amaanka ee maamulka Soomaaliland.
Qabashada gabadhaan ayaa waxay ka danbaysay ka dib markii wasiirka Madaxtooyada ee Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan dacwad ka geeyay sal dhiga.
Kiiskaan oo maalmahaanba soo socday ayaa waxaa u fariisatay maxkamada magaalada Hargeysa, waxaana Maxkamada la keenay Nadra Maxamed, sidoo kalana waxaa yimid wasiirka madaxtooyada Soomaaliland.
Qaadiga Maxkamada ayaa sheegay in wasiirka uu ku dacwooday in gabadhaan ay u soo dirtay fariin Aflagaado ah, inkastoo la sheegayo in fariinta gabadhaan ay ku dhaliilaysay maamulka madaxweyne Siilaanyo.
Go’aanka maxkamada ayaa dib loo dhigay ilaa iyo maalinta Sabtiga ah, waxaana arintaan ay hadal heyn badan ku abuurtay shacabka degan magaalada Hargeysa.